ဘောလုံးသမားတွေဆိုပြီး ပညာမတတ်ဘူးလို့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့
ဘောလုံးလောကမှာ ဘွဲ့ရပညာတတ် နာမည်ကြီးကစားသမားများ
10 Oct 2018 . 4:53 PM
ပညာရေးဆိုတာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းရာမှာ အရေးပါဆုံး ဒေါက်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ တချို့သော ဘ၀တွေမှာတော့ ပညာရေးထက် ပိုဦးစားပေးရွေးချယ်ရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း အများကြီးပါ။ အဲဒီဘ၀တွေထဲမှာ ဘောလုံးသမားတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘောလုံးနဲ့ဖက်ပြီး ရှင်သန်လာခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေအတွက် ပညာရေးခရီးလမ်းကို အဆုံးထိလျှောက်ဖို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ဘယ်ကလပ်က နည်းပြဖြစ်ဖြစ်၊ အသင်းပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကစားသမားခေါ်ရင် ပညာတတ်ဘွဲ့ရလားလို့ မေးပြီး ခေါ်တာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘောလုံးသမားတိုင်း ပညာမဲ့တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှားရှားပါးပါး ဘွဲ့ရပညာတတ် ဘောလုံးသမားတွေရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အကြောင်းကို Akhayar Sports ပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတရစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
ကာဇက်စတန်ကလပ် FC Kairat အသင်းမှာ လက်ရှိကစားနေတဲ့ အာဆင်နယ် နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်း အာရှာဗင်ဟာ ရုရှားကစားသမားတွေထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ဘွဲ့ရပညာတတ် ဘောလုံးသမားတစ်ဦးပါ။ သူ ယူထားတဲ့ဘွဲ့က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကစားရတဲ့ ဘောလုံးအားကစားနဲ့ တခြားစီပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အာရှာဗင်ဟာ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း ဘာသာကို Master ဘွဲ့အထိ ရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးသမားဖြစ်လို့ အာရှာဗင်ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက ပေါက်ကရဖြစ်မယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သူဟာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေထဲက တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။
ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ အီတလီ ၀ါရင့်နောက်ခံလူကြီး ချီလီနီဟာ ကွင်းထဲမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေသလို ကွင်းပြပမှာလည်း ဘွဲ့ရပညာတတ် ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူတက်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်က ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အီတလီမှာ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ Laurea တက္ကသိုလ်က စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှု ဘာသာနဲ့ ၂၀၁၀ တုန်းက ဘွဲ့ရခဲ့သလို ဘောလုံးကစားရင်း ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လမှာ Master ဘွဲ့အထိ ရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
မန်ယူအသင်း ကွင်းလယ်လူ မာတာကလည်း ခေသူတစ်ဦးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကွင်းတွင်းမှာ အောင်မြင်မှု အများကြီး ရယူခဲ့သလို လူမှုဘ၀မှာလည်း အထင်ကရ ဘွဲ့တစ်ခု ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ မာတာဟာ မက်ဒရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ Camilo Jose Cela တက္ကသိုလ်က Sports Science and Finance ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဗန်ဒါဆား Van der Sar
ချန်ပီယံလိဂ်အပါအ၀င် ကစားသမားဘ၀မှာ ဆုဖလား(၂၇)ခုအထိ ရယူခဲ့တဲ့ နယ်သာလန်နဲ့ မန်ယူ ဂန္ထ၀င်ဂိုးသမားကြီး ဗန်ဒါဆားကလည်း ဘွဲ့ရပညာတတ်တစ်ဦးပါ။ International Sports Management ဘာသာရပ်မှာ Master ဘွဲ့ရထားတဲ့ ဗန်ဒါဆားဟာ အခု အေဂျက်စ်အသင်းမှာလည်း မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားကြီး လမ်းပတ်ဟာ သူ့ခေတ်အခါတုန်းက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ်လူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပတ်ဟာ ဘောလုံးကစားတဲ့နေရာမှာ ထူးချွန်သလို ပညာရေးဘက်မှာလည်း ထက်မြက်တဲ့သူပါ။ သူက လက်တင်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Subject မှာ A အဆင့်နဲ့ ဘွဲ့ရယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။
Photo:The Independent,YouTube,Juventus,Tops Wallpaper HD,Mirror,
ဘောလုံးလောကမှာ ဘှဲ့ရပညာတတျ နာမညျကွီးကစားသမားမြား
ပညာရေးဆိုတာက လူတဈယောကျရဲ့ ဘဝဖွတျသနျးရာမှာ အရေးပါဆုံး ဒေါကျတိုငျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့ တခြို့သော ဘဝတှမှောတော့ ပညာရေးထကျ ပိုဦးစားပေးရှေးခယျြရတဲ့ အခွအေနတှေလေညျး အမြားကွီးပါ။ အဲဒီဘဝတှထေဲမှာ ဘောလုံးသမားတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဘောလုံးနဲ့ဖကျပွီး ရှငျသနျလာခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံးသမားတှအေတှကျ ပညာရေးခရီးလမျးကို အဆုံးထိလြှောကျဖို့ဆိုတာက မဖွဈနိုငျသလောကျပါပဲ။ ဘယျကလပျက နညျးပွဖွဈဖွဈ၊ အသငျးပိုငျရှငျတှပေဲဖွဈဖွဈ ကစားသမားချေါရငျ ပညာတတျဘှဲ့ရလားလို့ မေးပွီး ချေါတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဘောလုံးသမားတိုငျး ပညာမဲ့တှတေော့ မဟုတျပါဘူး။ ရှားရှားပါးပါး ဘှဲ့ရပညာတတျ ဘောလုံးသမားတှရှေိနပေါသေးတယျ။ သူတို့တှရေဲ့ အကွောငျးကို Akhayar Sports ပရိသတျတှေ ဗဟုသုတရစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
ကာဇကျစတနျကလပျ FC Kairat အသငျးမှာ လကျရှိကစားနတေဲ့ အာဆငျနယျ နာမညျကြျောကစားသမားဟောငျး အာရှာဗငျဟာ ရုရှားကစားသမားတှထေဲမှာ ထူးထူးခွားခွား ဘှဲ့ရပညာတတျ ဘောလုံးသမားတဈဦးပါ။ သူ ယူထားတဲ့ဘှဲ့က ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ကစားရတဲ့ ဘောလုံးအားကစားနဲ့ တခွားစီပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အာရှာဗငျဟာ ဖကျရှငျဒီဇိုငျး ဘာသာကို Master ဘှဲ့အထိ ရယူခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဘောလုံးသမားဖွဈလို့ အာရှာဗငျရဲ့ ဒီဇိုငျးတှကေ ပေါကျကရဖွဈမယျလို့ မထငျလိုကျပါနဲ့။ သူဟာ ရုရှားနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာတှထေဲက တဈဦးအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ။
ဂြူဗငျတပျဈနဲ့ အီတလီ ဝါရငျ့နောကျခံလူကွီး ခြီလီနီဟာ ကှငျးထဲမှာ ခွစှေမျးပွကစားနသေလို ကှငျးပွပမှာလညျး ဘှဲ့ရပညာတတျ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျထားသူဖွဈပါတယျ။ သူတကျခဲ့တဲ့ တက်ကသိုလျက ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတျပါဘူး။ အီတလီမှာ နာမညျကွီးတက်ကသိုလျဖွဈတဲ့ Laurea တက်ကသိုလျက စီးပှားရေးနဲ့ ကုနျသှယျမှု ဘာသာနဲ့ ၂၀၁၀ တုနျးက ဘှဲ့ရခဲ့သလို ဘောလုံးကစားရငျး ၂၀၁၇ ဇူလိုငျလမှာ Master ဘှဲ့အထိ ရယူခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
မနျယူအသငျး ကှငျးလယျလူ မာတာကလညျး ခသေူတဈဦးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကှငျးတှငျးမှာ အောငျမွငျမှု အမြားကွီး ရယူခဲ့သလို လူမှုဘဝမှာလညျး အထငျကရ ဘှဲ့တဈခု ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ မာတာဟာ မကျဒရဈမွို့မှာရှိတဲ့ Camilo Jose Cela တက်ကသိုလျက Sports Science and Finance ဘှဲ့ ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ဗနျဒါဆား Van der Sar
ခနျြပီယံလိဂျအပါအဝငျ ကစားသမားဘဝမှာ ဆုဖလား(၂၇)ခုအထိ ရယူခဲ့တဲ့ နယျသာလနျနဲ့ မနျယူ ဂန်ထဝငျဂိုးသမားကွီး ဗနျဒါဆားကလညျး ဘှဲ့ရပညာတတျတဈဦးပါ။ International Sports Management ဘာသာရပျမှာ Master ဘှဲ့ရထားတဲ့ ဗနျဒါဆားဟာ အခု အဂေကျြဈအသငျးမှာလညျး မနျနဂေငျြးဒါရိုကျတာအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနသေူဖွဈပါတယျ။
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမားကွီး လမျးပတျဟာ သူ့ခတျေအခါတုနျးက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကှငျးလယျလူတှထေဲက တဈဦးဖွဈပါတယျ။ လမျးပတျဟာ ဘောလုံးကစားတဲ့နရောမှာ ထူးခြှနျသလို ပညာရေးဘကျမှာလညျး ထကျမွကျတဲ့သူပါ။ သူက လကျတငျဘာသာနဲ့ပတျသကျတဲ့ Subject မှာ A အဆငျ့နဲ့ ဘှဲ့ရယူထားသူဖွဈပါတယျ။